Ukusebenzela Uthixo ngeminikelo - Christian Literature Fund
04May 4th May 2018
Ukusebenzela Uthixo ngeminikelo
By CLF	All, Pamphlets, Pamphlets for Congregations XHO172
Ingaba imali yethu inento yokwenza nokumkhonza kwethu uThixo? Kutheni kufuneka ukuthi sikhuphe imali emsebenzini kaThixo? Abantu abasweleyo bona? Ukukhupha umnikelo yinto enzulu yenkolo yomntu. Yinxalenye yokukhonza kwethu uThixo. Indlela esikhupha ngayo iminikelo okanye esinganikeli ngayo, ibonisa kakuhle indlela esicinga ngayo ngathi nangoThixo. Icacisa kakuhle indlela esinxulumana noThixo ngayo.
Singabanini okanye singabaphathi?
Abaninzi bethu sizibona njengabanini okanye abanikazi. Kukho izinto esizibiza njengezethu. Sithetha “ngendlu yam”,” ibandla lam,” “ umsebenzi wam”, “ umtwana wam”, “ imali yam,” “ ixesha lam” okanye “ubomi bam” ngokungathi singabanikazi bezo zinto. IBhayibhile isifundisa ukuthi zonke izinto ezisemhlabeni zezikaThixo. Nguye ozidalileyo. Zonke, nathi ngokwethu, singabakMdali.
Kwindumiso 24:1 sidibana nala mazwi: “Lelika Yehova ihlabathi nenzaliseko yalo, elimiweyo, nabahleli kulo;” kuHagayi 2:8 “Isilivere yeyam, igolide yeyam; utsho uYehova wemikhosi”.
UThixo upha omnye nomnye wethu inxalenye yezi zinto ukuze sizonwabele, siphile ngazo, sizilondoloze yaye sahlulele nabanye. Kodwa ziya kuhlala zizezakhe, ngeke zibe zezethu. Uzibeka nje phantsi kolondolozo lwethu. Usenza abaphathi bezinto zakhe. Usithembile okokuba emsebenzini wakhe njengabameli bakhe izinto zakhe siza kuziphatha kakuhle egameni lakhe.
KuLuka 12:35-48 naku 1 kaPetros 10-11 sifunda ngebali labaphathi abathembekileyo. KuMateyu 25:14-30 sifunda ngomahluko phakathi kwabaphathi abalungileyo nabangalunganga. Ibali likaYosefu kuGenesis 37 – 47 ngumzekelo omhle womphathi olungileyo. UYesu Krestu nguye kuphela umphathi ogqibeleleyo owenza idini ngokuthobekileyo emsebenzini kaThixo uBawo (kwabaseFilipi 2:3-8).
KuLuka 12:13-22, 16:1-13 naku -19:11-27 sifunda ngabaphathi abangalunganga nabangendawo. Ngabantu abacinga ukuba zonke izinto zezabo bodwa. Bayalibala okokuba bona bangabaphathi nje; bavelela nje ngabaphathi. Ngolo hlobo bangamasela ezinto zikaThixo. Imali nezinye izinto zithabatha indawo ebalulekileyo kaThixo ebomini babo. Babangamakhoboka ezinto zabo. IBhayibhile isiqaphelisa ngokuthanda imali (1 kuTimoti 6:10) nangokuthandaza izithixo zemali nezobutyebi. “Aninako ukukhonza uThixo nobutyebi” (UMateyu 6:24).
Ukujonga imali yethu nobutyebi bethu ngeliso elitsha.
Mhlana uKrestu asikhululayo kwesi simo sokuba ngaboni, siza kuqaphela into yokuba asisengabo abethu, kodwa ubomi bethu nazo zonke izinto esinazo zezikaKrestu. Siza kuba nako ukujonga ngeliso elitsha zonke izinto uThixo asibabala ngazo ntsuku zonke: ubomi bethu, impilo yethu entle, iintsapho zethu nabahlobo bethu, ukutya nempahla, indlu, ulwazi namandla okusebenza, amehlo neendlebe, izandla kunye neenyawo.
UThixo ukwasipha umhlaba nendalo zesikwazi ukuziphilisa ngazo. Ngeliso elitsha sizibona zonke njengesipho sofefe nenceba ephuma esandleni sikaThixo. Usipha zona ukuze sibe nombulelo, kodwa ukwasibeka njengabaphathi bazo. UThixo ufuna ukuthi sisebenze ngenkathalo yaye sahlulele nabanye. Akufuneki izinto sizigcine njengezethu kuphela. Ngezakhono zethu nolwazi lwethu, imali yethu nexesha lethu, kufuneka simkhonze UThixo apho athe wasibizela khona ukuba simsebenzele simphilele.
Ngemali uThixo asipha yona kufuneka sondle iintsapho zethu. Kufuneka sisebenze ngenkathalo ngeemali zethu yaye singayicithi ngezinto ezingenamsebenzi. Ku – 1kuTimoti 5:8 bayakhalinyelwa ngamandla abazali ngokungazikhathaleli iintsapho zabo.
Ngemali nezinto uThixo asiphe zona kufuneka kangangoko sinako sikhathalele nabantu abasweleyo (kwabase-Efese 4:28). Ngeliso lethu elitsha siba nako ukubona apho kukho intswelo. Loo nto itsho siyazi eyona ndlela ilungileyo yokunceda.
Ukunyaniseka kokholo lwethu kuvavanywa ngohlobo lokuthi sinako na ukubona abantu abasweleyo yaye sense imizamo yokubanceda (KuMateyu 6:1-4, kuMarko 10:17-30, kuMateyu 25:31-46 nakuYakobi 2:14-17). Zonke ezo zinto sizenza ngombulelo novuyo. UYesuuthi, “Ukupha kunoyolo ngaphezu kokuphiwa” (Izenzo 20:35).
Iminikelo: imfundiso yeBhayibhile.
Sibizelwa ekuthini inxalenye yemali yethu sinikele ngayo ukuze umsebenzi kaThixo wenziwe ngayo ecaweni. Iminikelo esinikela ngayo ecaweni kuthethwa ngayo endaweni ezininzi ehayibhileni.
KwiTestamente eNdala umthetho ubusithi umSirayeli ngamnye makanikele ngesishumi sayo yonke into anayo (ILevitikus 27:30-32). Le minikelo yezishumi yayinikwa ababengeleli nabaLevi ukuze benze imisebenzi etempileni. Nabo ngexesha elifanekileyo bekufuneka benikele ngesishumi sabo (INumeri 18:26). Amazibulo emfuyo nawo ibingakaThixo. Ngaphandle koko amakholwa ebesenza iminikelo ekhethekileyo ukuze itempile yakhiwe yaye igcinwe isemgangathweni (2 ziKronike 12:9-14, 1 ziKronike 29). Isishumi sichaza inxalenye ebalulekileyo yezinto esinazo esizibona zibalulekile.
Ngexesha lomprofeti uMalaki abantu bebekhalaza ngokuthi uThixo akabasikelelanga ngokwaneleyo. Bebekhalaza ngokuthi uThixo akabathandi (UMalaki 1:11-14). Impendulo yomprofeti yayisithi ingxaki yabo iseminikelweni yabo. UThixo ulindele ukuba eyona nxalenye ebalulekileyo yezinto zethu sinikele ngayo kuye. Kodwa babenikela ngeziqhwala nezinto ezifayo kuThixo. Ngolo hlobo lweminikelo yabo babemphanga uThixo.
Umprofeti wenza umcelimngeni kumakholwa wokuba anikele kuThixo yaye amthembe ukuba uza kuwasikelela (UMalaki 3:6-12). Xa sinikela sibonisa ukumbulela nokumthemba kwethu uThixo.
Xa uYesu ethetha ngokukhupha iminikelo ubhekisa kubaFarasi ababethabatha ukukhupha iminikelo njengomthetho ongqonqo yaye begxininisa kwelokuba abantu banikele nangeyokugqibela abanayo. Kodwa nangona kunjalo bebelibala eyona nto ibalulekileyo, eyokuba kufuneka benze umsebenzi ngenceba, benze ubulungisa yaye bavelele njengabaphathi abalungileyo (UMateyu 23:23).
Hayi ngezishumi kuphela, kodwa nangobomi bethu buphela kufuneka sisebenzele uKrestu nabamelwane bethu. KuMarko 12:41-44 uYesu ubonisa abafundi bakhe indlela ihlwempu lomhlolokazi lanikela ngayo imalana elinayo. Iminikelo imalunga nokuthi ngobomi bethu bonke sikhonze uThixo yaye simthembe ngokupheleleyo.
Iminikelo yethu akufuneki isebenzele ukunceda amabandla ethu kuphela. Kufuneka namabandla asweleyo siwancede. Kwi- 2 kwabaseKorinte 8 – 9 uPawulos ubalisa ngendlela amakholwa aseMakedoni ayeqokelela ngayo imali ngokungavimbiyo aze ayithumele kumabandla asweleyo kwelaseJudeya. Omnye omnye wayenikela kangangoko anako. Abanye babenikela ngokungaphaya kwamandla abo. Bebekwenza oku ngovuyo nangombulelo kuzo zonke izinto uThixo athe wabababala ngazo. Kubaluleke kakhulu kuThixo ukuba kubekho ukubonelelana ecaweni. Iicawe ezingahlelelekanga mazibonelele ezihlelelekileyo. Kungoko kufuneka sincedane ngeminikelo yethu.
Isikhokhelo nomzekelo wokunikela Ukukhupha iminekelo kuyinto ebalulekileyo emsebenzini kaThixo.
Yindlela esikhonza ngayo. Kungoko kubalulekile ukuba iminikelo yethu siyinikele phakathi ecaweni ngemini yecawe xa sikhonzayo. Oku kuza kusinceda sikhumbule ukuba ubomi bethu bonke bobukaThixo yaye yonke into esinayo ivela kuThixo.
Omnye nomnye anganikela kangangoko anako, yaye anikele ngento ayibona ibalulekile. Isishumi senzuzo yethu sesona sikhokhelo sibalulekileyo. Kufuneka sinikele ngemali. Kodwa nangexesha lethu nezakhono zethu singanikela. Kwezinye iicawa kusasetyenziswa indlela yokuthi amalungu anikele inxalenye esisigxina, ngokuphantse kwafana nokukhupha imali yobulungu embuthweni. Ngolo hlobo uhlawulela inxalenye yamalungelo athile ecaweni. Ngokwesiqhelo idla ngokuba sisabelo esincincane yaye kuhlala kunjalo iminyaka emininzi. Asiyondlela ilungileyo leyo. Amabandla asebenza ngolu hlobo, akadli ngakukhula yaye akanako nokuzimela. Umnikelo yinto eyahlukileyo “kunokuhlawula ukuze umntu abe lilungu lecawa”, kwaye kukwangumnyinge ongaphaya kwesabelo esisigxina. Xa amalungu eqala ngokukhupha umnikelo ngokunyanisekileyo, elo bandla likhawuleza likhule, liqhube kakuhle.
Kufuneka sinikele njani?
Masinikele ngombulelo kungekho kunyanzeliswa. Kuyinto elungileyo nentle xa amalungu ngexesha lenkonzo esiza ngaphambili ecula, evuya esizisa iminikelo. Oku kubonisa indlela esinombulelo ngayo kuThixo. Akukho ngxaki xa amabandla eqokelela imali yeminikelo ngolunye uhlobo, okanye ngokomzekelo kubekho uluhlu lwamagama apho amalungu aza kuhanjelwa emakhayeni kuqokelelwe iminikelo, okanye kwenziwe ibhazara. Kodwa ezo ngqokelelo kufuneka zenziwe ngovuyo, njengomsebenzi wothando kuThixo (2 kwabaseKorinte 8:11).
Sinikela kuba ntsuku zonke esandleni sikaThixo sifumana lukhulu (2 kwabaseKorinte 8:7). Kwakhona ngenxa yokuba uThixo uye wadela unyana wakhe uYesu Krestu waba lidini lokuxolela izono zethu. Yiyo loo nto sinikela ngokuvuya. Xa sinikelayo, sibonisa kwaye singqina ukuba simthembile uThixo. Ngolo hlobo senzela abanye umzekelo kwaye senza umsebenzi wecawe ube lula. Ngaphezu koko uThixo uyadunyiswa.
Ingaba zikhona iinjongo ezingezizo zokukhupha umnikelo?
Ewe, kubalulekile ukuba singanikeli ngenjongo yokubonwa ngabanye. Ngaloo ndlela ukunikela kwethu kuza kungqamana nathi, nefuthe lethu limtyeshele uThixo. Eyona nto ibalulekileyo yeyokokuba singanikeli ngenjongo yokufumana iintsikelelo zikaThixo. Kukho kwezi ntsuku abashumayeli abashumayela umyalezo ongenguwo, “ivangeli yempumelelo”. Ingcinga yabo yeyokuthi xa sinikela kakhulu uThixo usisikelela ngobutyebi, ngempilo nangethamsanqa. Yindlela engalunganga nengcinga engeyiyo yento esingayifumaniyo eBhayibhileni. Ijongana nje nentswelo zabantu, nangendlela esinokujija isandla sikaThixo ukuze sibe ngabaphumelelayo.
Ngamaxesha amaninzi olu hlobo lokushumayela lunento yokwenza neenkokheli zeenkonzo ziyifumane ngondlela mnyama imali kumalungu ecawa. Iminikelo kufuneka injongo yayo ibe kukubulela nokukhonza uThixo, hayi ukuxhamla nokufumana inzuzo.
Icawa kufuneka isebenzise iminikelo njani?
Njengabaphathi abathenjiweyo iinkokheli zecawa kufuneka zisebenzise imali yecawa ngenkathalo. Mayisetyenziselwe ukugcina izakhiwo zecawa zisemgangathweni. Kufukeka isetyenziswe kwakhona emisebenzini yecawa, apha ebandleni, kananjalo ngaphandle kwebandla ngokunokwalo. Kubalulekile ukuba umfundisi okanye abasebenzi bamaxesha onke ecaweni bafumane umvuzo oza kubaphilisa (1 kuTimoti 5:18). Yinto entle xa abefundisi bakwaLizwi bengenaxhala lokuba baza kuphilanjani na. Kufuneka benikele ngamandla abo nangexesha labo ekwenzeni umsebenzi kaThixo. Apho ibandla lingenako ukubaxhasa kakuhle, kufuneka abefundisi bevunyelwe ukwenza omnye umsebenzi ukuze bangaxhomekeki kakhulu ecaweni. Ukusebenza ngokunenkathalo ngemali kaThixo kuchaza ukuthi kufuneka kugcinwe iincwadi zemali kakuhle yaye kubekho rhoqo inkcazelo epheleleyo ngobume bezimali. Umntu omnye, okanye inani elithile, akufunekanga lisebenze ngendaba zemali lilodwa okanye lithabathe izigqibo lilodwa. U-2 KwabaseKorinte 8:20 ngumzekelo omhle nesikhokhelo malunga nalo mba. Xa kuqhutywa ngolu hlobo kubakho ukuthembeka, nto leyo eyenza abantu bakhuphe iminikelo ngokunganyanzelwa.
Ngesiqhelo kukho izithembiso zentsikelelo xa sithe sasebenzela uThixo ngombulelo. IBhayibhile izele yimizekelo malunga nezo zithembiso: “uThixo uthanda umphi ochwayithileyo” (2 kwabaseKorinte 9:7). Eyona nyaniso ibalulekileyo yile yokuba uThixo usisikelela ngenxa yofefe lwakhe, hayi ngenxa yokuba sizisebenzele ezo ntsikelelo okanye ngeminikelo yethu sizama ukumnyoba kusini na.
UThixo usisikelela ukuze nathi sibe yintsikelelo kwabanye ukuze sibe nako ukumhlonela nangemali nezinto athe wasipha zona njengabaphathi.
26Jul 26th Jul 2018
In our July Newsletter you can read all about the "Woorde van hoop" book launch, CLF's Mandela Day Action... read more
Bullying What is it? VERBAL (through words) When one child calls another names or teases or berates him or her. SOCIAL (by friends) When... read more
Tik is not for me
You have probably heard of Tik. It is the street name for a very dangerous drug with the chemical... read more
God se reëls hou my veilig
Kyk ’n bietjie na die verskillende heinings of mure rondom mense se huise. Party mure is sterk en baie... read more